SomaliaReport: Qarax Dhinteen Daawadayaal ee Garoonka Muqdisho
By ABDIAZIZ MOHAMED DIRIE 02/27/2012
Labo ruux ayaa ku nafwaayey shan kalena way ku dhaawacmeen markii miinooyinka dhulka ee meelaha fog laga hago lala eegtay dad kubadda cagta ku daawanayey xaafada Hariiryaale ee Muqdisho, sida uu goobjooge usheegay Somalia Report.
“labo wiil ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen,” Cabdullaahi Barre oo ah askari dawlada Soomaaliyeed. “Badidood waxay ahaayeen kurayo laakiin labo waa 25 jiro.”
Sida ay Somalia Report usoo tabiyeen saraakiisha boliiska oo ku sugnaa garoonka kubada cagta ee Munashiibiyo oo qaraxu ka dhacay, dhibanayaasha ayaa daawanayey tartan udheexeyey labo kooxood ee degaanka.
“Waxay ahayd cayaartii ugu danbeysay ee tartanka oo dadweyne farabadan ayaa daawanayeen,” waxaa yiri Maxamed Cabdi oo sarkaal boliis ah.
Cabdiraxman Cali oo ah sarkaal boliis oo ka tirsan Saldhiga Boliiska Wardhiigley ayaa sheegay inaan saraakiil dawlada ahi aysan joogin goobtaa.
Askar joogtay goobta ayaa sheegay in miinooyin kale laga saaray goobta inta qaraxani dhicin.
Wariyaha Somalia Report oo booqday goobta ayaa soo tabiyey in miinada lagu qariyey jiingad garoonka geeskiisa.
Kooxna ma sheegan masuuliyadeeda laakiinse fallagada al-Shabaab oo u dagaalamaya xukunka Soomaaliya ayaa fulin jirey weeraro ay ku qaadaan dadka shicibka ah ilaa iyo sidii ay Ogostii lasoo dhaafay Muqdisho uga baxeen.